» राजनीतिको झोलाभन्दा कृषिको बोरा नै ठीक
२०७८ पुष ११, आईतवार १४:२०
“पार्टीले जनयुद्धको भावअनुसार काम गर्न पनि छाड्यो । कार्यकर्ता झोला बोकेर ठूला नेताको चाकरी गर्नमा मरिमेट्न थाले । जसले गर्दा धुपौरेगिरि गर्ने र ‘एसम्यान’ भएर मात्रै जिन्दगी चलाउने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गयो ।'”
– लोकेन्द्र विष्ट मगर
चार दशक लामो राजनीतिक जीवनमा दुईपटक मन्त्री भइसकेपछि पनि राजनीति छोडेर कृषि क्रान्तिमा होमिँदा लोकेन्द्र विष्ट कृषिकर्ममा पनि जम्न सक्छ भन्ने धेरैले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । दश वर्षअगाडि मात्रै राज्यको नीति निर्माणतहसम्म पुगेको व्यक्ति अहिले कृषि कर्ममा मनैदेखि तल्लित भएर लागेको छु । मैले कृषिमा लाग्ने प्रण गर्दै राजनीतिमा कहिल्यै नफर्कने प्रतिबद्धता गर्दा धेरैले विश्वास नै गरेनन् । तर, अहिले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई वास्ताविकतामा परिणत गर्न सफल छु ।
रुकुमको त्रिवेणी नगरपालिका (तत्कालीन मुरु गाविस) मा पिता हस्तराम विष्ट र माता पुतला विष्टको जेठो सन्तानका रूपमा मेरो जम्न भएको हो । हाम्रो विष्ट परिवार कृषिमै रमाइरहेको थियो । सामान्य किसान परिवारमा जन्मे हुर्केको म चारजना दिदी–बहिनीका बीच एक्लो छोरो थिएँ । अहिले मेरो परिवारमा श्रीमति र एक छोरी छन् । छोरी काठमाडौंमै बस्छिन् भने श्रीमतिले मलाई कृषि कर्ममा सहयोग गरिरहेकी छिन् ।
राज्यको शासनसत्ता परिवर्तन गर्ने र देशको मुहार फेर्ने महत्वकांक्षा बोकेर राजनीतिक क्रान्तिमा होमिएको थिएँ । परिवार भने गाउँकै सामान्य कृषि पेसामै थियो । हाम्रो पुख्र्यौली पेसा पनि कृषि नै हो । कृषि कर्मले आफ्नो पुस्तैनी जीवन सुधार्न नसकिएको थाहा थियो तर पनि आधुनिक ढंगले कृषि गर्ने, व्यावसायिक बन्ने हो भने सम्भावना र अवसर जति पनि छ भनेरै कृषिमा होमिएको हुँ । किसान परिवारमा हुर्किएकाले मलाई माटोसँग खेल्ने विषयमा कुनै अत्यास पनि लागेन । तीन वर्षअघि (भदौ २०७५) देखि राजनीतिक महत्वकांक्षालाई छाडेर कृषि कर्ममा सक्रिय भएको हुँ ।
पछिल्लो समय कृषि पेसाप्रति आकर्षित युवा पुस्ताको आशा र भरोसासमेत गर्ने व्यक्तिको परिचय बन्दा खुसी लागेको छ । कृषिमा लाग्नु ठीक सात वर्षअगाडिको भदौमा पर्यटनमन्त्रीका रूपमा कृषि पर्यटनको सम्भावना खोज्ने योजना निर्माणमा तल्लिन थिएँ, अहिले कृषिले दिएको अवसरमा डुबुल्की मारिरहेको छु । दाङमा ड्रागन फ्रुट सुरु गर्नुअघि सुरुमा मैले काभ्रेको भकुन्डेबेसीमा ४३ रोपनी जग्गा लिएर खेती किसानीमा लागेको थिएँ । लगत्तै काठमाडौंको साँखुमा पनि १४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्म सुरु गरेँ ।
कृषि कर्मको बाटो देखेको त्यो क्षण
राजनीतिक भेटघाटका क्रममा कुनै कामको सिलसिलमा १७ वर्षअगाडि डा. जगन्नाथ राईसँग भेट भएको थियो । डा. राई उनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालमा पहिलोपटक सिउँडी प्रजातिको ड्रागन फ्रुट भित्र्याउने काम गर्नुभएको थियो । उहाँसँगको भेटले मलाई एक प्रकारको ऊर्जा दियो । डा. राईले नै मलाई ड्रागन फल चिनाउने काम पनि गर्नुभयो ।
राईले दक्षिण कोरियाबाट ल्याउनुभएको बढी पौष्टिकता हुने र नयाँ प्रजातिको कालो चामल (ब्ल्याक राइस) को उत्पादनमा पनि मलाई जोड दिनुभयो । ब्ल्याक राइस कृषि क्षेत्रमा नयाँपनको प्रयोग थियो भने यसले कृषि काम गर्ने उत्साहसमेत थप्यो । व्यावसायिक बालीको खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदा पहिल्याएको त्यही दुई उत्पादन (ब्ल्याक राइस र ड्रागन फ्रुट) अहिले मेरो जीवन परिवर्तनको संवाहक हुन पुगेको छ ।
कृषि कर्म गर्ने र नेपालमा फरक ढंगले काम गर्ने सोचाइ त्यतिबेलै आइसके पनि उपयुक्त समय भने तीन वर्षअगाडि मात्रै आयो । राजनीतिबाट संन्यास लिने निर्णयपछि आधुनिक ढंगले कृषि कर्म गर्ने र व्यावसायिक खेती गरेर ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. गिरिराज त्रिपाठीलाई भेटेपछि मात्रै निकालेको हुँ ।
राजनीतिमा वितृष्णा पैदा हुँदै गएकाले राजनीतिको झोला बोक्नुभन्दा कृषिको बोरा बोक्नु उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक जीवनबाट संन्यास लिएर २०७५ देखि कृषि कर्ममा होमिएँ । ड्रागन फ्रुट सुरु गर्नुअघि दाङमै कालो चामलको खेती सुरु गरेपछि मेरो कामको चर्चा हुन थालिसकेको थियो । कालो चामल पौष्टिक तत्व बढी हुने, विभिन्न दीर्घरोगीलाई लाभदायक हुने भएकाले धेरैले रुचाए पनि । कालो चालमको व्यावासायिक खेती अझै सम्भव भइरहेको छैन तर, बीउ उत्पादनको काम भइरहेको छ । ब्ल्याक राइसको बीउ जोगाउन अहिले दुई कठ्ठामा खेती गरेको छु । यो बाली नेपालका लागि नयाँ भएकाले बीउ जोगाउँदै थप खेतीयोग्य भूमिमा विस्तार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो धानको बाली जोगाउन र फैलाउन भने राज्यले नै चासो दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मैले २०३५/०३६ सालमा झन्डै १४ वर्षको उमेरमा विद्यार्थीकालमै मसालबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेको थिएँ । विद्यार्थी आन्दोलनकै क्रममा दाङको घोराहीबाट २०४३ सालमा ६ महिना जेल पनि परें । कृषि परिवारमै हुर्किएको म चार दशक लामो राजनीतिक जीवनपछि पुनः कृषि कर्ममै फर्किएँ । विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेको हुनाले सशस्त्रद्वन्द्वका समयमा भूमिगत जीवन बिताउनेदेखि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य हुँदै राजनीतिको माथिल्लो तह मन्त्रीसम्म भएँ । आफैं संलग्न रहेको पार्टी जनयुद्ध लडेर आएको थियो । तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि भने पार्टीका नेता कार्यकर्तामा कामै नगरी खानुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । यो प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउँदा पार्टी अध्यक्ष पुष्कमल दाहालसँग अन्तर संघर्ष बढ्यो । अन्ततः मैले राजनीतिबाटै विश्राम लिएँ ।
राजनीतिक संघर्ष गर्दा र मन्त्री भएर सिंहदरबार छिर्दाको भन्दा बढी आनन्द अहिले कृषि कर्मले दिएको छ । सशस्त्र युद्धमा लागेको पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि कार्यकर्तामा काम नगरी खानुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी हुँदै आएको थियो । जसले गर्दा गलत प्रवृत्ति विकास हुन थाल्यो । म आफूचाहिँ काम नगरी खाने प्रवृत्तिको विरोध गर्न थालें । पार्टीले जनयुद्धको भावअनुसार काम गर्न पनि छाड्यो । कार्यकर्ता झोला बोकेर ठूला नेताको चाकरी गर्नमा मरिमेट्न थाले । जसले गर्दा धुपौरेगिरि गर्ने र ‘एसम्यान’ भएर मात्रै जिन्दगी चलाउने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गयो । यस्तो प्रवृत्तिले चल्दैन भन्ने लाग्छ । जिन्दगी चलाउन आफैंले माटोसँग पिरती गाँस्नुपर्ने, माटोसँग खेल्ने र मिल्नुपर्ने तथा माटोमै जम्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै राजनीति छाड्ने निष्कर्षमा पुगें । हो, राजनीति छाड्दा कृषिमा सम्भावनाको खोजी तथा अनुसन्धान भने गरेको थिएँ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर कृषिका विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा लिइएको ज्ञान नै जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भयो ।
सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणबिनाको राजनीतिक क्रान्तिको भविष्य नहुने र त्यसका लागि आफैंले संघर्ष गर्नुपर्ने बुझाइका कारण कृषि कर्मका लागि प्रेरित ग¥यो । यसले जनतालाई एक त कर्मशील हुन सिकाउने भयो नै अर्कोतर्फ कसैसँग हात थाप्नुपर्ने र अर्काको गुलाम गरेर मात्रै जिन्दगी चलाउनुपर्ने भन्ने मान्यता तोड्यो । काम गरेर खाँदा कोही सानो हुँदैन भन्ने सत्य बोध र काम गरेर खान लाज मान्न पनि हुँदैन भन्ने विश्वास समाजलाई देखाउन पनि राजनीतिक क्रान्तिबाट कृषि क्रान्तिमा होमिएको हुँ । तीनजना साथीसँगको सहकार्यमा दाङको तुलसीपुरमा सुरु गरेको ड्रागन फ्रुट खेती अहिले फल दिने अवस्थामा पुगेको छ । तीन बिघामा आधुनिक ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरेदेखि आफू व्यस्त पनि भइयो । कृषि पेसाले पूर्ण सन्तुष्ट दिएको हुँदा अब कहिल्यै राजनीतिमा फर्कन्छु भन्ने लागेको छैन ।
तीन भाइको सहकार्य जुटेको थलो
मैले कृषिमा भएको सम्भावना, जोखिम र अवसरलाई राम्रोसँग बुझेका भए पनि कसरी नयाँ र फरक काम गर्ने भन्ने अन्योलमै थिएँ । दाङकै वीरबहादुर बुढा र धनबहादुर केसी बराबरीको साझेदारीमा खेती गर्न सहमत भएपछि भने कृषिकर्म अगाडि बढाउन सकिने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । कृषि नै पृष्ठभूमि भएकाले पनि काम गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज भयो । तीन बिघा ६ कठ्ठा जमिन १५ वर्षलाई भाडामा लिएर सुरु गरिएको कृषि कर्म सन्तोष गर्ने चरणमा पुुगेको छ । सम्झौताको तीन वर्ष बित्यो । अझै १२ वर्षलाई जमिन भाडामा प्रयोग गर्न पाइने भएकाले चिन्ता कम र कर्म बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विदेशमा २५ वर्षसम्म प्रतिफल दिने ड्रागन फ्रुटले नेपालमा भने हावापानी फरक भएकाले १५ वर्षसम्म मात्रै उत्पादन दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसले डेढ वर्षमै प्रतिफल दिन्छ । आधा क्षमतामा गत वर्षदेखि नै उत्पादन दिएको छ भने अर्को आधा क्षमता यो वर्षदेखि सुरु भएको छ । अहिलेसम्म लगानी मात्रै भएकामा अबदेखि प्रतिफल आउन थाल्छ । पाँच वर्षमा ऋण तिरिसक्ने र बाँकी १० वर्ष भने लाभको प्रतिफल लिने समय हुन्छ भन्ने विश्वास छ । भाडामा लिएको पूरै जमिनमा खेती सुरु भइसकेको छ । दोस्रो वर्षको तेस्रो चरणको प्रतिफल आइसकेकाले अब चौथो चरणको फल टिप्ने बेला भएको छ ।
वर्षमा सातदेखि आठ पटकसम्म फल टिप्न मिल्ने ड्रागन फ्रुटको बजार भने निकै राम्रो छ । दाङमै मागअनुसार फल पु¥याउन मुस्किल भएको छ भने यसको माग दाङवरपरका सहरसहित काठमाडौंबाट पनि उत्तिकै माग आइरहेको छ । मागअनुसार आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था अझै छैन । सम्भावना र माग भएकैले ड्रागन फ्रुटको बजारमा समस्या नरहने अनुमान छ ।
ड्रागन फल दुई प्रकारको उत्पादन हुन्छ । भित्र रातो र बाहिर पनि रातो भएको फल (रेड एन्ड रेड) को प्रतिकिलो आठ सय रुपैयाँमा दाङबाटै बिक्री भइरहेको छ भने भित्र सेतो र बाहिर रातो (रेड एन्ड ह्वाइट) प्रतिकिलो सात सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । एकपटक लगानी गरेपछि फेरि ठूलो लगानी गर्नु पर्दैन । पहिलो लगानी गरेर प्रतिफल दिने अवस्था आएपछि भने मल हाल्नुपर्ने, गोडमेल गर्नुपर्नेसहितको सामान्य काम मात्रै हुन्छ । हाम्रो अहिलेसम्म एकतिहाइ लगानी उठिसकेको छ । हालसम्म एक करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । कृषि कर्मले आफूलाई सन्तोष र आरामको निद्रा दिएको छ ।
अन्य ठूला उद्योगमा जस्तो स्थायी कर्मचारी नचाहिने, कर्मचारीले काम बिगार्लान् भन्ने चिन्ता पनि नहुने हुँदा आवश्यक कामदार ज्यालादारीमै पाइने क्षेत्र पनि हो, कृषि उद्यम । यो कृषि फर्ममा पुरुषको तुलनामा महिला कामदारलाई प्रोत्साहन स्वरूप काममा लगाउने गरिएको छ । र, औसतमा अरूले दिनेभन्दा बढी नै ज्याला दिने गरिएकाले पनि कामदारको अभाव र चिन्ता छैन ।
मैले खेती गरिरहेको ब्ल्याक राइस र ड्रागन फल दुवै नेपालका लागि सम्भावना भएको र उपयुक्त नगदे बाली हो । ब्ल्याक राइस समुन्द्र सतहबाट एक हजारदेखि २२ सय मिटरसम्मको उचाइमा राम्रो हुन्छ भने यो मध्यपहाडी खालको भूगोलमा उपयुक्त हुन्छ । ड्रागन फलचाहिँ उष्ण प्रदेशीय भएको हुँदा गर्मी हावापानीमा राम्रो उत्पादन दिने फल मानिन्छ । दाङमा सुरु गरिएको व्यावसायिक उत्पादनको यो फलको खेती तराई भेकमा पनि उत्तिकै राम्रोसँग फस्टाउने देखिन्छ । १५ सय मिटरसम्मको उचाइमा पनि यो फल लगाउन सकिन्छ । यसले गर्मी ठाउँमा भने तुलनात्मक रूपमा बढी फल दिने मानिन्छ ।
राज्यको चासो नै देखिएन
नेपालमा सम्भावना भएको, युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्न सक्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सक्ने कृषि तथा नयाँ जातको खेतीमा सरकारको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । दैनिक हजारौं युवा लाइन लागेर विदेश जाँदा ती युवाका लागि दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । राज्यले ध्यान दिने हो भने कृषिमा नयाँ प्रजातिको खेती थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।
देश विकासको नेतृत्व तहमा पुगिसकेका व्यक्तिले सुरु गरेको पेसामा समेत सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन भने आम कृषकसम्म सरकार पुग्यो कि पुगेन भनेर प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ । हामी कहीँ कतै सहयोग माग्न भने गएनौं । राज्यले पनि देखेन । सरकारी निकायले एउटा ‘सोलार प्लान्ट’ भने राखिदिएको छ । त्यसले पानी तान्ने काम हुन्छ । घाम लागेको बेला पानी तान्ने मेसिन जोडिएको छ । राज्यबाट कुनै आश नगर्दा पनि आएको यो सोलार प्लेट भने अर्थपूर्ण छ ।
–नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार